Shaqooyinka umeerinta khadka tooska ah ee ugu Fiican ee La Heli karo 2022
Bogga ugu weyn Shaqooyinka umeerinta khadka tooska ah ee ugu Fiican ee La Heli karo 2022
Ardayda kulliyadaha maanta waxaa saaran cadaadis aad uga badan kuwii ka horreeyay. Iyagu ma boodboodayaan dugsiga oo kaliya laakiin shaqada iyo ballanqaadyada kale sidoo kale.
La yaab ma laha in celceliska ardayga kuleejku u baahan yahay in laga caawiyo waxbarashadooda. Internetku wuxuu u sahlay helidda shaqo umeerin siyaabo badan, laakiin weli waxaa jira waxyaabo ay tahay in la tixgeliyo ka hor intaadan mid u gelin.
Laga soo bilaabo qorshayaasha casharrada iyo hababka lacag bixinta ilaa shahaadooyinka iyo mushaharkaaga saacad, waxaan dabooli doonnaa gudaha iyo dibedda helidda iyo degitaanka shaqo baraha internetka ah.
Baadhid: Intee in le'eg ayay tahay in Ardayga Kulliyadda lagu soo oogo Tababar 2022 -ka?
Waa kuwee Barta Wax -barashada ee ugu lacagta badan?
Mid ka mid ah goobaha ugu fiican ee waxbaridda onlaynka ah ee bixiya lacagta ugu badan waa goFluent.
Boggan wuxuu ka hadlayaa dhinacyo kala duwan oo casharrada barnaamijka ah, oo fiirinaya sida barnaamijku ugu kobcayo bulshadeena, macallimiin ayaa loo baahan yahay.
goFluent wuxuu bixiyaa 18-25 doolar saacaddii.
Akhri Sidoo kale: Sida Loogu Bixiyo Macallinka Online 2022 | 20 Shabakadaha Ugu Fiican Oo Si Fiican U Bixiya
Waa maxay Shirkadda Waxbaridda Onlineka ee ugu Fiican?
Shaqada umeerinta ee ugu fiican ee Tutor.com waa ilaha ugu weyn ee waxbaridda onlaynka ah. Waxay bixiyaan kheyraadka fasaladaada iyo sidoo kale diyaarinta guud ee nolol maalmeedka.
Markaad ka fikirto magacyada ugu waaweyn warshadaha, Tutor.com ayaa isla markiiba maskaxda ku soo dhacda.
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo la yaab leh sida kheyraadkoodu yahay, waxaa jira khataro ay tahay in qofku tixgeliyo. In kasta oo ardayda qaar u arkaan Tutor.com inay tahay shar shar ah, haddana waa run in arday badan ay dhibbane u yihiin kuwa wax khiyaaneeya.
Kahor intaadan aqbalin dalab kasta oo ku yimaada, halkan waxaa ah dhowr waxyaalood oo maskaxda lagu hayo: Tutor.com waxay doorbideysaa inaad bixiso horudhaca jadwalkaaga toddobaadlaha ah.
Si aad u bilowdo, tag goobta, gal koontadaada, oo dib u eeg astaantaada si aad u hubiso inaad soo dhejisay waxaad ballanqaadayso.
Tutor.com waxay leedahay xirmo loo dhan yahay oo ku siinaya wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u dhisto barnaamij wax ku ool ah.
Arag sidoo kale: 20 Fikradaha Ganacsi Bilowga Ugu Fiican Si Lacag Loogu Sameeyo 2022
Lacag intee le'eg ayuu Macallin Online ah sameeyaa?
Macallimiinta onlaynka ah ayaa lacag badan ka qaata qaadashada casharrada maalin kasta, tani waxay dhacdaa sababtoo ah baaxadda ballaaran ee internetka ee bulshada ayaa ku biirtay shaqsiyaadka doorbida inay wax ka bartaan guriga.
Qaddarka uu helay macallin online -ku wuxuu ku xiran yahay shirkadda uu macallinku ka qaybgalo.
Qaarkood waxay go'aansan karaan inay bixiyaan 18 doollar saacaddii qaarna waxay bixin karaan 22 doollar saacaddii, markaa waxaad aragtaa in qaddarku uu gebi ahaanba ku tiirsan yahay loo -shaqeeyahaaga.
17 Shaqooyinka Casharrada Ugu Fiican ee Onlineka ah ee La Heli Karo 2022
Haddii aad ka fekereyso inaad casharro ku qaadatid khadka tooska ah oo aad lacag ku kasbato geedi socodka, hoosta ayaa ah shaqada umeerinta internetka ee ugu fiican ee aad ku bilaabi karto.
Study.com waa mid ka mid ah meelaha ugu fiican ee barayaasha internetka ee Mareykanka. Inta sharaxaada shaqadu ay marayso, furitaanku wuxuu ku qoran yahay Ingiriis, saynis, xisaab, iyo kimistari.
Xaqiiqdii, Study.com waa goobta xulashada dadka raadinaya macallimiin waqti yar.
Haddii aad raadinayso booska waxbarashada dugsiga sare ama dugsiga dhexe, waxaa mudan inaad hesho diyaargarowga ugu badan ee suurtogalka ah.
Marka la eego celceliska waqtiga, waxay qaadataa in la helo shahaado iyo in la helo waayo -aragnimo, lahaanshaha qorshe adag oo meel yaal ayaa fure u noqon doona soo degidda riwaayaddaas qumman.
Markaad hesho shaqadaada waxbarid ee ugu horreysa, xeerka wanaagsan ee suulka ayaa ah inaad samaysato “qolka xaaladda” ama “xarunta maskax -abuurka” si aad si joogto ah u samayso qoraallo oo aad u cusboonaysiiso qorshahaaga inta xirfaddaada waxbaridda ay sii socoto.
Haysashada hannaan si aad u cusboonaysiiso qorshahaaga ayaa kordhin doonta suurtogalnimada inaad ku sii jiri doonto horumarada berrinka.
Anigoo baray dugsiga sare iyo K-8 labadaba, waxaan ku dhihi karaa awood ahaan in shaqada K-12 ay aad uga duwan tahay tan tacliinta K-12.
XIDHIIDHKA: 15 Badbaadada Lacagta Ugu Sarreysa Ee NFL | Gobolka ugu Fiican
Tutor.com waa mid ka mid ah goobaha shaqada ugu weyn ee umeerinta oo leh keydka macluumaadka macalimiinta.
Shirkadu waxay iskaashi la leedahay kumanaan kuliyado iyo jaamacado ah si ay ardayda u siiso taageero waxbarasho oo lacag la’aan ah. Waxaad samayn kartaa sicirkaaga toddobaadlaha ah ama billaha ah marka loo eego shaqada aad raadinayso.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad caddeyso inaad leedahay dabeecad akhlaaqeed. Maadaama shirkaddu la shaqayso jaamacado badan, tani way kugu adkaan kartaa inaad samayso.
Waxa kale oo goobta ka jira tartan badan. Hubi inaad ku samayso shaqada gurigaaga goobo kale ka hor intaadan dooran middan.
Waxa kale oo aad ku samayn kartaa qayb ka mid ah umeerin goobta barta internetka adiga oo adeegsanaya kombiyuutarkaaga ama kiniinigaaga. Shaqooyinka Flexi-time waxay bixiyaan saacado dabacsan, laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa 9 galabnimo
4: Barashada Casharrada Guriga
Helitaanka macallin guri -guri oo intarneedka ah ayaa caqabad ku noqon kara ardayda u baahan in laga caawiyo shaqadooda fasalka.
Shaqooyinka umeerinta online -ka ugu fiican waxaa badanaa lagu xayeysiiyaa siyaabo kala duwan. Waxaa jira goobo badan oo bixiya umeerin leh ballanqaadka 100% dakhliga soo gala ardayga si loo bixiyo kharashaadka fasalkooda.
Ardaydu waxay heli karaan macallin ka caawiya koorsadooda oo dhan intarneedka, iyagoon u baahnayn inay ka baxaan raaxada gurigooda.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ka raadinayso macallin iskuulkaaga, waxaa laga yaabaa inay kuu sahlanaato inaad shaqaalaysiiso qof ka socda iskuulka aaggaaga.
5: Tutapoint.com- Shaqada umeerinta online-ka ugu fiican
Tutapoint.com, waxaad iska qori kartaa si aad internetka uga hubiso oo aad ula xiriirto macallimiinta waddanka oo dhan oo kaa caawin kara shaqada dugsigaaga.
Markaad is -qorto, waxaad Tutapoint u sheegi kartaa dugsigaaga, kuwa waaweyn, iyo fasallada. Kadib waxay xaqiijin doontaa macluumaadkaaga waxayna kuu soo diri doontaa farriin ay ku qoran yihiin liiska macallimiin ku aqbali doona arday ahaan.
Si aad u bilowdo, waa inaad qaadataa qiimeyn lacag la'aan ah oo aad ka jawaabtaa dhowr su'aalood oo ku saabsan qaabka waxbarashadaada.
Kadib, marka lagu xaqiijiyo, Tutapoint ayaa kuu soo diri doonta astaanta macallinkaaga. Inta soo hartay adiga ayay kugu xiran tahay. Gabi ahaanba waa bilaash inaad is qorto oo aad raadsato.
6: Akademiyada Xiriirka - Shaqooyinka Wax -barashada Online -ka ee Sare
Haddii aad haysato waxa ay u baahan tahay si aad u noqoto macallin guuleysta, laakiin aadan haysan iskuul ama kulliyad, markaa tixgeli inaad ka shaqeyso warshadaha umeerinta ee internetka.
Waxaa jira shirkado waxbarid oo badan oo kuu oggolaanaya inaad lacag ku kasbato internetka oo aad wax ku barato muxaadarooyinka fiidiyaha.
Wealthstreet waa mid ka mid ah dhowr shirkadood oo si gaar ah u shaqaaleysiiya macallimiin leh tababar dugsi ama kulliyad.
Sababtoo ah marka lagu daro inay ku siiso liiska casharrada, shirkadu waxay kaloo bixisaa manhaj qotodheer si ay kaaga caawiso inaad ku gudubto imtixaannada ugu muhiimsan maadada aad dooratay.
Qaybta ugu fiican? Markaad ka gudubto imtixaanaadkaan, isla markiiba waxaa lagu siinayaa mushaarka shaqadaada
Ma waxaad hore u ahayd khabiir sida loo baro carruurtaada asaasiga ah?
Ma taqaan erey kasta cutub kasta oo ku jira buug kasta? Miyaad taqaanaa sida si fudud loogu dhex maro fasalka oo si dhakhso ah u ururin karto una tarjumi karto macluumaadka ardaydaada?
Markaa shaqadan adiga ayey kuu tahey.
Ururadan darajada sare leh ayaa si joogto ah u shaqaalaysiiya macalimiin barnaamijyadooda dugsiga hoose iyo dhexe. Badanaa waxaad u baahan doontaa inaad barato ardayda sida loo sameeyo casharrada guriga.
Ka fiiri tilmaamaha tallaabo-tallaabo ah ee ku habboonaanta shirkadda kugu habboon halkan.
Qeybta 2: Waaxda Waxbarashada Shaqooyinkaan ma ahan kuwa qof walba loogu talagalay, laakiin haddii aad u furan tahay wax barashada, fursadaha ma dhammaadaan. Waaxda Waxbarashadu waxay si joogto ah u raadineysaa dad ka caawiya inay wax ku bartaan onlaynka, koorsooyinka qof-qof ama onlayn ah.
Goobaha sida Preply iyo ForaMaster ayaa kaa caawin kara inaad hesho shaqo baraha internetka dhawr tallaabo oo fudud.
XIDHIIDHKA: 20 Shaqooyin Oo 20 Saacadood Bixiya 2022 | Lacag Degdeg ah
Waxaad si fudud u geli kartaa goob kasta, oo aad horay u sii xulan doontaa heerka darajada aad caawimaad ka raadinayso. Preply wuxuu soo jiidi doonaa qaar ka mid ah dugsiyada khuseeya daafaha dunida.
Markaad aqbasho mid ka mid ah macalimiinta, shirkadu waxay kuu soo dirtaa liiska saacadaha aad shaqayn karto. Waxa kale oo lagaa rabaa inaad geliso fiidiyow si aad u gudbiso arjigaaga.
ForaMaster wuxuu leeyahay wax gaar ah oo la yiraahdo liisaska “shaqo cagaaran”. Bandhigyadan waxay kaa rabaan inaad samayso qaar ka mid ah adeegyada bulshada si aad ugu beddesho magaca shaqada oo aad bixiso heshiiskii aad ku heshiisay.
9: Dhegaha Sixirka
Arday badan ayaa raadsada shaqooyinka umeerinta ee internetka sababta oo ah waxay rabaan inay helaan raaxo inay lahaadaan kaaliyayaal umeerin oo iyaga ka caawiya inay shaqadooda qabsadaan.
Markaad baraha kula hadasho internetka, waxay sida caadiga ah ku siiyaan shaqo -guri waxayna kaa codsanayaan inaad dhammaystirto.
Haddii aad haysato qoraalka heerka kuleejka ama aad qaadatay fasallada heerka kuleejka, waxaad joogtaa meeshii saxda ahayd.
Xitaa haddii aadan waligaa horay u qaadan koorsooyin kuliyadeed, xirfadahaaga cilmi -baarista, qorista, iyo fahamka ayaa loo wareejin karaa shaqada dugsiga, laakiin waa inaad imtixaan gasho marka ay timaaddo fahamka tilmaamaha macallinka.
Ha gelin shaqo umeerinta onlaynka ah adigoo u malaynaya inaad ku qori kartid magaca buugga oo aad heli kartid jawaabta. Barayaashu waxay inta badan bixin doonaan tilmaamo faahfaahsan iyo dhibaatooyinka muunadda ka dib.
10: WyzAnt - Shaqada Waxbaridda Tooska ah ee ugu Fiican
Sidii aan soo sheegnay, shaqooyinka umeerinta ee internetka waxay u fiican yihiin dadka mashquulsan. Markay ku dhammaystaan ​​internetka, waxaad ka shaqayn kartaa kombiyuutar meel kasta.
Tani waxay fursad kuu siinaysaa dadka intooda badan. Sidoo kale, uma baahnid inaad dhex marto xirmooyinka gudbinta resumeygaaga ama aad ka walwasho helitaanka warqaddaada daboolida kahor sannad -dugsiyeedka.
WyzAnt waxay kugu heli kartaa shaqo macallin wax ka yar 60 sekan. Dhab ahaantii, waxay heli karaan boqollaal macallin oo adduunka oo dhan ah.
Markaad gudbiso resumeygaaga iyo warqadda daboolka ah, waxaad markaa ka dooran kartaa jagooyin kala duwan oo barayaasha internetka ah oo kala duwan.
Waxaad ka dooran kartaa kalfadhiyada tooska ah ee tooska ah, iyo sidoo kale umeerin barnaamij oo ku saabsan maaddooyin kala duwan. Xitaa waxaad dooran kartaa iskuul ku yaal Yurub ama Aasiya haddii taasi tahay waxaaga.
Chegg waa mid ka mid ah mareegaha waxbaridda ee ugu weyn Mareykanka Shabakadu waxay bixisaa boqolaal kun oo mowduucyo ah si ardayda looga caawiyo inay helaan ilaha ugu habboon uguna qiimaha badan imtixaanadooda.
Tan waxaa ku jira kheyraadka sida buugaagta wax lagu barto, buugaagta sayniska, majaladaha, iyo inbadan. Waxaan dhex mari doonnaa mowduucyo muhiim ah oo aan tixgelinno ka hor inta aan la sameyn koonto oo aan bilowno kulan umeerin.
Fiiri bogga rasmiga ah ee Chegg si aad u bilowdo!
12: Macalinka Diyaarinta Imtixaanka Kaplan - Shaqada umeerinta ee ugu fiican ee internetka
Shaqooyinka umeerinta ee onlaynka ah ayaa loo abuuray hab lagu kasbado xoogaa lacag caddaan ah oo dheeri ah waqti yar oo dheeri ah.
Da'da dalabka onlaynka ah, waxaa jira xitaa shaqooyin u baahan waxyar in ka badan gelinta buundooyinkaaga iyo soo gudbinta meeleynta.
Haddii aad diyaar u tahay inaad habeen walba dhawr saacadood geliso, waxaa hubaal ah in baahi loo qabo adeegyadaada.
Shaqada Macalinka Diyaarinta Imtixaanka Kaplan waa mid gaar ah. Waxay kaliya u baahan tahay adeegsiga qaar ka mid ah xirfadaha gorfaynta ee cajiibka ah si loo dhammaystiro mid ka mid ah koorsooyinkooda internetka.
Laga soo bilaabo habka codsiga ee adag ilaa imtixaanka laftiisa, waxaa jira waraaqo badan oo la dhammaystiri karo. Kaliya kuwa leh xirfado sare ayaa awoodi doona inay qabtaan shaqadan.
GoFluent waa shirkad umeerin online ah oo la shaqaysa macallimiin ku takhasusay ka shaqaynta horumarinta webka, SQL, PHP, Python, iyo Java.
Shirkadu waxay ku talajirtaa inay ku xirto meheradaha macalimiin dabooli kara baahidooda ganacsi.
Badi macmiilkoodu wuxuu ku wajahan yahay IT-ga, waxayna inta badan la shaqeeyaan machadyada dawladda iyo waxbarashada.
GoFluent ma bixiso shahaadada koorsooyinkeeda.
XIDHIIDHKA: 15 Shaqooyinka Internetka ee Waqti-Waqtiga ugu Fiican Sanadka 2022-ka
Sida loo bilaabi lahaa:
Waxaa lagaa doonayaa inaad ku gudubto baaritaanka taariikh nololeedkii hore.
Macalinkaaga ayaa dib u eegi doona dulmarka koorsadaada.
Dhowr maalmood oo shaqo fasal ah ka dib, waxaad heli doontaa qiimeynta xirfadahaaga.
Waxaa lagu siin doonaa qaddar saacad ah qaddar shaqo ah oo aad dhammaysay.
Waa maxay macallin TutorMe? Arday badan oo ay ka buuxaan rajada ah inay isku dayaan inay bartaan maadooyinka aysan hubin inay ku raaxaysan doonaan mustaqbalka fog, baahida macallimiinta ayaa muhiim u ahayd.
Adeegsiga websaydhada umeerinta sida TutorMe ayaa aad caan u noqday sannadihii la soo dhaafay. Tababarayaashu waxay lacag ku heli karaan adeegyadooda onlayn, iyagoo ka caawiya ardayda hawlaha ay inta badan la halgamayaan.
Shaqada koorsada ee TutorMe bixin karto way kala duwanaan kartaa waxaana ku jiri kara maadooyinkan: Xisaabta, Cilmiga Bulshada, Sayniska, Ingiriiska, Multimedia, iyo Ganacsiga.
TutorMe waxaa laga yaabaa inaysan noqon goobta ugu fiican ee shaqo raadintaada haddii aad tahay arday u heellan oo diiradda saaraya oo had iyo jeer waqti geliya dhammaan waxbarashadooda.
Miyaad isku aragtaa inaad had iyo jeer ka dhex booddo mashaariicda?
15: Kooxda Khubarada - Shaqada umeerinta internetka ee ugu fiican
Kooxda Khubarada ayaa sidoo kale kuu oggolaanaysa inaad hesho macallin online ah oo leh taleefan ama wada sheekaysiga fiidiyaha, ama jadwalka kalfadhi hal-hal ah guriga.
Mararka qaarkood sida ugu wanaagsan ee wax loo baran karaa waa in loo shaqeeyo. Tusaale ahaan, haddii aad ku dhibtoonayso xisaabta, waxay ku caawin kartaa in qof aad aqoon u leh uu ku baro.
Waxaad wax ku baran doontaa xawaarahaaga iyo hab adiga kugu habboon, haddii aad ku jirtid waqti go'an ama aad haysato waqti aad ku bixisid. Laakiin sababta oo ah barashada onleenka ayaa ah dadaal aad u xoog badan, dadku waxay bixiyaan kumanaan doolar si ay u helaan macallimiin.
Sababtaas awgeed, hadda waxaa jira madal onlayn ah oo aad ku kireysan karto macallin khabiir ah qayb yar oo kharashka ah. Waxaa loogu yeeraa VIPKid waana madal isku xirta ardayda u baahan in laga caawiyo fasalladooda iyo macallimiinta ugu sareysa ee goobtooda.
Fikradda ka dambaysa VIPKid waa mid sahlan: waa inaad is -qortaa oo aad bixisaa khidmad waxbarasho oo yar.
17. EF Bar Online
Shaqada wax barashada ee onleenka ah sinaba uma sahlana, laakiin waa mid ka macquulsan oo la heli karo intii aad malayn lahayd. EF Teach waxay bixisaa umeerin dalbasho iyada oo loo marayo barnaamijkeeda iyo degelkeeda.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad iskeed u shaqayso waqtigaaga firaaqada ah kadibna aad u beddesho shaqo waqti-dhiman ah, ama waxaad aadi kartaa shaqo onlayn ah oo si gaar ah loogu talo galay umeerin mid ka mid ah macaamiisheeda.
Barashada EF waa ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay macallimiinta mustaqbalka iyo kuwa hadda jira maxaa yeelay waxay ka qaadataa wax badan oo dhib ah adeegsiga aaladaha internetka ee horumarinta xirfadda.
Waxay yihiin kuwo deg deg ah oo sahlan in la isticmaalo, laakiin waxay kaloo ka dhigan tahay inaad heli doonto oo kaliya barkad yar oo arday ah.
Waxaa intaa dheer tan, EF Teach waxay ku dallacdaa casharro aad uga yar adeegyada kale.
Marka, maxay yihiin shaqooyinka ugu wanaagsan ee baraha internetka ee ardayda kuleejka? Waa kuwan 17 suurogal oo kuu oggolaan doona inaad noqoto macallin kuu gaar ah.
Baruhu intarneedka wuxuu samayn karaa 30 ilaa 50 doollar saacaddii
Umeerinta internetka ma tahay mid aad u saraysa baahida?
Haa, aad bay u sarreysaa baahida loo qabo koritaanka baaxadda leh ee internetka ee bulshadeena.
Waa maxay shirkadda umeerinta ugu fiican?
VIPKID waa mid ka mid ah goobaha ugu fiican ee wax lagu baro oo bixiya cashar 30-daqiiqo ah.
Ma ku noolaan kartaa macallin online ahaan ah?
Dhab ahaantii, barayaasha internetka ee u go'ay waxay kasbadaan lacag aad u badan taas oo ka caawisa inay siiyaan baahidooda maalinlaha ah.
Maado noocee ah ayaan barayaa?
Hagaag, waxay kuxirantahay waxaad taqaan oo aad bixin karto laakiin qaar ka mid ah maaddooyinka sida dhaqsaha u koraya ee umeerinta internetka waa xisaabta iyo Ingiriiska
Sida Loo Helo TV -ga Cable ee Bilaashka ah ee Internetka Cable Sannadka 2022 -ka
Shirkadaha Ammaanka Guriga ugu Fiican ee 2022
Caymiska shaqala'aanta (UI), waxaa badanaa loo yaqaan faa'iidooyinka shaqo la'aanta. Waa nooc ka mid ah caymiska ay dawladdu maalgeliso kaas oo bixiya…
10 Shaqooyinka Golaha Guriga ee Sharciga ah oo Lacag Bixin Doona 2022
Ficil kasta wuxuu leeyahay sabab iyo saamayn labadaba. Raadinta shaqooyinka isku -ururinta guriga ayaa caddeyn u ah arrintaas. Sababaha…
Dunidu si xawli ah ayay isu baddalaysaa, meel ka cadna ma jirto marka loo eego dhinaca u shaqaynta ciidamada. Marka la tixgeliyo…
Waxaan ku soo koray maqalka odhaahda ah in abaalgudka macalinku Jannada ku jiro, dadaalka baaxadda leh awgeed...
Haddii aad taqaan qareen dembiilayaal ah oo ka mid ah tobanka qareen ee ugu mushaharka badan, gaar ahaan 2022,…
Ahaanshaha nanny caadi ahaan looma tixgalinayo boos shaqo oo faa'iido badan laakiin leh qoysas hodan ah oo raadinaya daryeelayaal khibrad leh…